Blog - Ojus Ayurveda Hospital and Research Centre
पञ्चकर्म के हो ?
अस्वस्थकर खानपान, प्रदुषण र अब्यवस्थित जीवन शैलीको कारण सिंगो मानव समाज नै अहिले जटिल रोगहरु जस्तै क्यान्सर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अल्सर, प्यारालाइसिस, मानसिक रोग, आदिले आक्रान्त बन्दै गइरहेको छ । उल्लेखित कारणले गर्दा वर्तमानका साथै भावी पुस्ता समेत यस्ता रोगहरुको चपेटामा पर्ने प्रवल सम्भावना छ । आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले धेरै विकास गेरेको भनिएता पनि कैयौँ जीर्ण रोगहरुको उपचार मानिष्प्रभावी सावित भैरहेको छ । अतस् आयुर्वेद उपचार विधि अन्तर्गतको पञ्चकर्म चिकित्सा यस्ता रोगहरुको सफल उपचारमा एउटा महत्वपुर्ण कोशेढुङ्गा सावित भएको छ । पञ्चकर्म प्रधानतः शरीरको शुद्धिको एउटा सरल र प्रभावकारी प्रक्रिया हो । हजारौँ वर्ष अघि देखि हाम्रा ऋषिमुनीहरुको सघन खोज र अनुसन्धानद्वारा प्रमाणित पञ्चकर्म चिकित्सा असाध्य भनिएका रोगहरुको समूल नष्ट गर्न निकै प्रभावकारी सिद्ध छ । यस अन्र्तगत् मुख्यत पाँच प्रक्रियाहरु पर्दछन् । साथै स्वास्थ्य व्यक्तिको स्वास्थ्य रक्षा अर्थात निरोगी जीवन यापनका लागि यो सेवा लिन सकिन्छ । वमन: शरिरमा सञ्चित दुषित कफ (Toxin), विजातीय तत्वहरु मुख मार्ग बाट बाहिर…
आयुर्वेद र शल्यक्रिया: आयुर्वेद चिकित्साको आठ अंगहरु मध्ये शल्यलाई प्रमुख रुपमा लिइन्छ ।परापुर्वकालमा शल्यविधा निकै विकसित थियो र विभिन्न रोगहरुको उपचारमा यसको प्रयोग गरिन्थ्यो । आयुर्वेद शल्य चिकित्सा मध्येको क्षारसुत्र विधि विकसित हुदै हाल विश्वभर नै फैलिरहेको छ । के हो क्षारसुत्र ? क्षारिय गुण हुने विभिन्न औषधद्रव्यहरु युक्त सुत्र (धागो) को प्रयोग द्वारा गरिने उपचार विधि नै क्षारसुत्र हो। यसको प्रयोगबाट गुदागतविकार (Ano-Rectal Diseases) माब्यापक सफलता पाईएको छ । क्षारसुत्र द्वारा सफलता पुर्वक उपचार हुने मुख्य रोगहरु निम्नानुसार छन् । पाईल्स (Piles) यस रोगमा गुदद्वारमा मासुको डल्ला जस्तो सुनिएको महसुस हुने ,दिसा गर्दा रगत देखिने , गुदद्वार पोल्ने , चिलाउने, दुख्ने , दिसा कब्जियत हुने आदि लक्षण देखिन्छ । गुदागत फिस्टुला (Fistula in Ano) यस रोगमा गुदद्वारको वरिपरी कुनै पनि भागमा सानो घाउ, खटिरा वा प्वाल जस्तो बन्छ र त्यस प्वालबाट बाहिर समय समयमा पिप, रगत वा दुबै मिसिएको जस्तो स्राव आउछ । लगाएको भित्रि बस्त्रभिजेको महसुस हुन्छ ।…
आयुर्वेद आयुको विज्ञान हो । यसले मनुष्यलाई स्वस्थ भई जीवन व्यतित गर्न प्रेरित गर्दछ । आयुर्वेदले रोगीको रोगको निवारण गर्नुको साथै स्वास्थ्य व्यक्तिको स्वस्थ्यको रक्षा पनि गर्दछ । आयुर्वेदले मुख्यतया शोधन र शमन चिकित्साको सिद्धान्त बाट शरीर स्वस्थ्य राख्दछ । शमन भन्नाले रोगोत्पादक दोषलाई शरीर भित्र दमन गरेर, शोधन भन्नाले रोगोत्पादक दोषलाई शरीरबाट वाहिर निकाल्ने वा उत्सर्जन गर्ने गर्छ । शोधन चिकित्सालाई आयुर्वेदमा पञ्चकर्म पनि भनिन्छ । जस अन्र्तगत : वमन विरेचन वस्ति रक्तमोक्षण र नश्य पर्दछन् । पुर्वकर्महरु शरीर अभ्यङ्ग (वाह्य स्नेहन ) जुन उपचार पद्धतीबाटशरीरमा चिल्लोपना आउँछ,शरीरगत केहि घटकहरुको विलयन भई तिनिहरुमा श्रवणशीलता उत्पन्न भई शरीर कोमल र मृदु हुन्छ भने त्यसलाई स्नेहन भनिन्छ । स्नेहन प्रकृया पनि वाह्य र आभ्यन्तर गरि २ प्रकारका हुन्छन् । वाह्य स्नेहन लाई शरीर अभ्यङ्ग पनि भनिन्छ । यसमा तेल घिउ आदि स्निग्ध (चिल्लो) पदार्थहरुको प्रयोग गरि निश्चित दिशामा शरीरका विभिन्न भागहरुमा मालिस गरिन्छ । यसरीतेल आदि स्निग्ध पदार्थहरुको प्रयोग गरी शरीर…